အသုံးပြုသူ:သူထွန်း/sandbox - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 21°32′51″N 95°17′14″E﻿ / ﻿21.5475006103516°N 95.287109375°E﻿ / 21.5475006103516; 95.287109375ကိုဩဒိနိတ်: 21°32′51″N 95°17′14″E﻿ / ﻿21.5475006103516°N 95.287109375°E﻿ / 21.5475006103516; 95.287109375
ငတမျှော်ရွာသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ ရေစကြိုမြို့နယ် အတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ငတမျှော်ရွာကို ရှေးအခါက
တို့ဟူ၍ အမျိုးလေးမျိုးတို့ဖြင် ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။
အလယ်ပိုင်း -တို့အားဖြင့် ခေါ်ဝေါ်လျက် ရှိပါသည်။
၂ ငတမျှော်ရွာ သမိုင်းကြောင်း
ငတ‌မျှော်ကျေးရွာကို လေ့လာရာ၌ လူမျိုးစုကျေးရွာဟောင်းများကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ရွာ၏ အနောက် မြောက်ထောင့်ကို ရှမ်းရွာဟုလည်းကောင်း၊ အနောက်တောင်ထောင့်ကို ကုလားရွာဟုလည်း‌ကောင်း၊ မြောက်ဘက်အရပ်ကို နန်းတော်ရာရပ်ဟုလည်းကောင်း ရှေးအခါက ခေါ်ဝေါဖူးခဲ့ကြပါသည်။ ငတမျှော်ရွာ၏ ပထဝီအနေအထားမှာ ဧရာဝတီမြစ်နှင့် (၃)မိုင်ခန့် ဝေးပြီး၊ ချင်းတွင်းမြစ်နှင့် (၂)မိုင်ခန့်သာ ဝေးကွားပါသည်။
ငတမျှော်ရွာသည် ပျူစောထီးဘုရင်လက်ထက် ငတမုဆိုးသည် ရွှေသမင်းကိုလိုက်ရာမှ ဝေးကွာသွားသော်အခါ ၎င်းရွာတည်ရာအရပ်ကို မျှော်ကြည့်ခဲ့သောကြောင့် ပျူစောထီးဘုရင်က ငတမျှော်ဟု အမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၈-ခုနောက်ပိုင်းတွင် ရေစကြိုမြို့ လူကြီးများက ငတမျှော်ကို ငတရော်ဟု အမည်ပြောင်းလဲ ရေးသားခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ရုံးစာများတွင် ငတရော်ဟု ဖြစ်နေပါသော်လည်း ရွာသူ ရွာသားများက ယခုအထိ ငတမျှော်ဟုလည်းကောင်း ငတရော်ဟုလည်းကောင်း သာရေး နာရေး ဘာသာရေး ရုံးစာများတွင် နှစ်မျိုးလုံးကို အသုံးပြုနေကြပါသည်။
ငတမျှော်ရွာ၏ ရေဆန်ဘက်ခေါ် မြောက်ဘက်အရပ်၌ ရှေးမင်းများ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သော စေတီတော် (၉)ဆူရှိပါသည်။
၎င်း စေတီတော်များမှာ …..
ကပ်ကျော်ရွှေလုံးတော်စေတီ (သီရိဓမ္မာသောကမင်း၊ ပျူစောထီးမင်း၊ အလောင်းစည်သူမင်း)
ငတမျှော်ရွာသည် ယခင်က ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၁၀)ကျောင်းရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ ၎င်း‌ကျောင်းတို့မှာ-
ဝါဆိုကျောင်း (ခ)(ရွှေ‌ကျောင်းကြီး၊ မြောက်ကျောင်းကြီး)
ယခုအခါ၌ ရွှေစေတီ-စသော ကျောင်း(၅)ကျောင်းများသာရှိတော့၍၊ ဝါဆိုကျောင်း-စသော ကျောင်း(၅) ကျောင်းတို့မှာ မရှိတော့ပါ။
ငတမျှော်ရွာသည် ဧရာဝတီမြစ်နှင့် ချင်းတွင်းမြစ်နှစ်မြစ်တို့၏ ကြား၌တည်ရှိသော မြစ်လယ်ကျွန်းဒေသ ဖြစ်သည်အားလျော်စွာ စပါး, ပဲမျိုးစုံ, နှမ်း, ပြောင်းဖူး, နှုတ်, ကြက်သွန်-စသော သီးနှံမျိုးစုံထွက်ရာဒေသ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
လူဦးရေ- ၂၂၂၄. အမျိုးသား- ၁၀၀၀. အမျိုး- ၁၂၂၂၄. အိမ်ခြေ- ၄၉၁. အိမ်ထောင်စု- ၅၃၃.
ကြေးတိုင်နှင့် မြေစာရင်း ဦးစီးဌာန
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ:သူထွန်း/sandbox&oldid=507109" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ မတ် ၂၀၂၀၊ ၁၈:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။